Huolong घाटी एक NextGen5रिल्स र 20 paylines सँग गेमिंग स्लॉट। 20p स्पिनबाट सबै यन्त्रहरूमा प्ले गर्न उपलब्ध छ, यो ओरिएंटल आधारित खेलले तपाईंलाई डबल पेआउट दिन्छ जब जंगली जीतको भाग हो। यो नि: शुल्क गेम सुविधामा पनि लागू हुन्छ जहाँ तपाईं 14 नि: शुल्क स्पिनहरूमा सम्भावित 12x गुणकसँग लिन सक्नुहुन्छ।
Huolong घाटी एक5रील हो, अगली गेेन गेमिंग बाट 20 पेनलाइन स्लट जुन डेस्कटप, मोबाइल र ट्याब्लेट उपकरणहरूमा केवल 20p देखि £ 100 सम्म स्पिन प्लेलिस्ट हो। यो चिनियाँ थीम खेल डबल जंगली जीत संगै नि: शुल्क स्पिन सुविधा छ जहाँ तपाईं 14 नि: शुल्क स्पिनहरूमा 12x लाई धेरै गुणस्तरमा पुग्न सक्नुहुनेछ!
खेल Baiyu दक्षिण मा Jiangqu नदी बेसिन मा स्थित सुंदर खेल मा आधारित छ चीन। एक शान्त अनुभव संग, ग्राफिक्स एक पृष्ठभूमि मा हरी, रसीश घाटी संग एक मूल आधार हो। रिल्समा भएका प्रतीकहरूले विभिन्न भाग्यशाली 8 हरूमा ड्रेगन, सुनकोष, हिरोइन, पाण्डा र ड्रेगनहरू समावेश गर्दछ।
मुखौटा जंगली प्रतीक हो र तपाईले 250 समयलाई5को लागि एक पेनलाइनमा दावी दिनुहुन्छ - यसले सबै प्रतीकहरू प्रतिमा र बोनसलाई प्रतिस्थापन गर्दछ। अधिक महत्त्वपूर्ण कुरा, जंगली प्रतीक विजेता संयोजन को भाग को रूप मा तपाईंको जीत परिणाम दोहोरो छ। प्रशंसक स्क्याटर हो र कुनै पनि विशेषताहरू ट्रिगर गर्दैन - तथापि, रिलेहरूमा कहीं पनि 2, 3,4वा5तपाईंलाई 1, 2, 15 वा 200 पटक तपाईंको दाबी दिनेछ।
हेर्न को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतीक लालटेन बोनस प्रतीक हो - रेन्डमा3वा अन्य जहाँ पनि नि: शुल्क गेम सुविधा सक्रिय हुनेछ। तपाईले6लालटेनबाट छनोट गर्न आवश्यक छ कि तपाइँ कति प्ले स्पिनहरू संग खेल्न सक्नुहुन्छ - तपाई4र7नि: शुल्क स्पिनहरू बीच प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईं 3x र 6x बीचको गुणक प्रकट गर्न सिक्काहरूबाट छान्नुहोस्।
अब, तपाईं यस सुविधा को पुन: प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं 14 मुक्त स्पिन सम्म खेल्न सक्नुहुनेछ - गुणक समान रूपमा नै सम्मानित संख्याको रूपमा रहनेछ। अधिक महत्त्वपूर्ण, जंगली युगल तपाईंको जीत जब एक विजेता संयोजन को भाग हो त तपाईं सक्छ, सिद्धान्त मा, हरेक मुक्त स्पिन मा एक 12x गुणक पाउनुहोस्!
कुल मिलाएर, हाउओलेग घाटी बेवास्ता आधारभूत रूपमा हो तर डबल जंगली जित्ने कारणले आधार खेलमा ठूलो जीतहरूको सम्भावना छ। सम्भावित 12x गुणक 14 नि: शुल्क स्पिनहरू सम्म ठूलो जीतको कारण बेशक नि: शुल्क गेम सुविधामा आउँछ। मैले यो उच्च विचलन प्रस्तावको माध्यमलाई 3,000 को अधिकतम विजेताको साथमा प्रत्येक खाली स्पिनमा तपाइँको दाबीको साथमा एक मिडिया पार्यो। यदि तपाइँ विषयवस्तु मनपर्थ्यो भने, म QuickCin को छुपा घाटी सिफारिस गर्दछु।
हाउओगोंग घाटी अपडेट गरिएको: जनवरी 15, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 हाउओगोंग घाटी
2.0.0.2 ड्रैगन ड्रप
2.0.0.3 उपहार पसल
2.0.0.4 कब्रहरु को खजाने (बोनस)
2.0.0.6 प्रिमियर रेसिङ
2.0.0.7 साँचो भ्रमहरू
2.0.0.8 सुनको लागि जानुहोस्